कर्मचारीलाई घरपायक जागिर – Rajdhani Daily
कर्मचारीलाई घरपायक जागिर
सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा कर्मचारी बिदामा भन्ने जवाफ पाउनुभएको छ ? कर्मचारी भेटिए पनि तपाईंको काम भएको छ ? अब कर्मचारीलाई यस्ता छुट र सेवाग्राहीलाई सास्ती हुनेछैन । सरकारले नयाँ मापदण्डमा दुईवटै समस्याको सम्बोधन गरेको छ ।
सेवा चुस्त बनाउन कर्मचारीलाई घरपायक सुविधा दिने गरी सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । त्यसका लागि कर्मचारीलाई घरपायक र रोजेको स्थानीय तहमा जाने अवसरसहितको मापदण्ड तयार भएको हो ।
सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड २०७४’ जारी गर्दै कर्मचारीलाई रोजेको र घरपायक सुविधासहित स्थानीय तहमा खटाउन लागेको छ ।
मापदण्डअनुसार सरकारले तत्काल स्थानीय तहको संगठनको अवस्था बुझ्ने, आवश्यक पर्ने कर्मचारीका लागि दरबन्दी खुलाउने र १५ दिनभित्र घरपायक वा चाहेको ठाउँका लागि निवेदन दिन सूचना जारी गर्नेछ ।
सूचना जारी भएपछि कर्मचारीहरूले सरुवा चाहेका ५ जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहको नामसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । कर्मचारीले दिएका निवेदन र माग भएका स्थानीय तहका नामका आधारमा प्राथमिकता हेरेर सकेसम्म माग गरेकै ठाउँ, त्यसमा नमिले नजिक सरुवा सरकारले स्वीकृत गर्नेछ । कर्मचारी खटाउँदा कुनै तहमा नपुगे मात्र अन्य गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला र प्रदेशका कर्मचारीलाई खटाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
ठेगाना रहेको स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भए अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकामा खटाउने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसैगरी, पतिपत्नी दुवै जना निजामति सेवामा भए सम्भव भएसम्म एउटै स्थानीय तहमा र त्यो सम्भव नभए नजिक ठाउँमा एउटै जिल्ला पार्ने गरी सरुवा स्वीकृत हुने मापदण्ड बनाइएको छ ।
सरकारले मापदण्ड बनाउँदा एक वर्षभन्दा कम उमेरको शिशु रहेको महिला कर्मचारी र नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामी कर्मचारीलाई रोजेको स्थानीय तहमा पठाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, कर्मचारीको उमेरअनुसार ज्येष्ठतालाई पनि आधार मानिनेछ । माग भएअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा ज्येष्ठ उमेरकालाई मापदण्डले प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै हाल प्रशासकीय अधिकृत वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख रहेकालाई सोही स्थानीय तहमा सहायक कर्मचारीको रूपमा नराखिने मापदण्डमा प्रस्ट छ । तर निवेदन दिएको नपाइएमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारीलाई स्थान तोकेर कामको जिम्मेवारीमा पठाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।